भीम रावलले कति मत ल्याउलान् ? - ramechhapkhabar.com
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा कस्ले जित्ला भन्ने चासो छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि दोहोरिने निश्चित जस्तै छ । तर, ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिएका उपाध्यक्ष भीम रावलले कति मत ल्याउलान् ? चासोको विषय बनेको छ ।